एनसेलको मोबाइल सेवामा रकम सकियो ? त्यसोभए घरमा नै बसेर यसरी गर्नुस सजिलै रिचार्ज - Technology Khabar
» एनसेलको मोबाइल सेवामा रकम सकियो ? त्यसोभए घरमा नै बसेर यसरी गर्नुस सजिलै रिचार्ज
देशभर लकडाउनले गर्दा मानिसहरु घरभित्रै बसिरहेका छन् भने विभिन्न मोबाइल अपरेटरहरुले आफ्ना सेवाग्राहीहरुलाई अफर र सुविधाहरु समेत घोषणा गरिरहेका छन् ।
सरकारको निर्देशन र कम्पनीहरुले समेत ग्राहकको अवस्थालाई ध्यानमा राखेर बोनस, छुटदेखि रिचार्जसम्मका अफरहरु सार्वजनिक गरेका छन् ।
एनसेलले पहिलेदेखि नै दिईरहेको अनलाइन रिचार्ज सेवामार्फत समेत घरबाटै आफ्नो सेवाहरु रिचार्ज गर्न र अनलाइनबाटै ती अफरहरु लिन र भुक्तानी गर्नसकिने छ ।
जसले गर्दा मानिसहरु घरबाहिर गएर रिचार्ज कार्ड किन्ने वा पसलमा गएर रिचार्ज गराउन अनुरोध गर्नुपर्दैन् ।
एनसेलले पनि अनलाइनबाटै रिचार्ज गर्न दिएको सुविधा प्रयोग गर्ने तरिका बारेमा हामी यहाँ जानकारी दिनेछौं । यसकाे लागि तपाईँको बैंक एकाउन्टमा भने रकम हुनुपर्दछ ।
– तपाईँ एनसेलको सेवा प्रयोग गरिरहनुभएको छ भने सबैभन्दा पहिले तपाईँ एनसेलको वेबसाइट https://www.ncell.axiata.com/ मा जानुहोस् । त्यहाँ तपाईँले अनलाइन रिचार्ज गर्नका लागि दाहिने भागको तल कुनामा रिचार्ज अनलाइन भन्ने अप्सन पाउनुहुनेछ त्यसमा ट्याप गर्नुहोस् ।
– त्यसमा ट्याप गरिसकेपछि तपाईँको स्मार्टफोन वा ल्यापटपमा नयाँ पेज https://payment.ncell.axiata.com/ खुल्दछ । सो पेजमा तर्पाइँले डेबिट क्रेडिट कार्ड रिचार्जको अप्सन पाउनुहुनेछ । जहाँ तपाईँले आफ्नो मोबाइल नम्बर राखेर रिचार्ज गर्न चाहेको रकम ट्याप गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसपछि त्यसलाई कन्टिन्यू पेमेन्टमा क्लिक गर्नुस् ।
– त्यसपछि तपाईँको स्मार्टफोनको डिस्प्लेमा अर्को प्रोसेसको स्टेज आउँछ जहाँ तपाईँले अघि उल्लेख गरेको रकम सहि छ र तपाईँको फोन नम्बर सहित ठिक छ वा छैन भनेर हेर्न सकिन्छ र ठिक भएमा प्रोसिड टू पेमा क्लिक गर्नुस् । यो प्रकृयापछि तपाईँको मोबाइल नम्बरलाई तपाईँको आफ्नो बैंक एकाउन्टमा जोडिन्छ ।
– अब तपाईँको मोबाइल नम्बरमा एउटा कोड नम्बर आउँछ जसलाई वन टाइम पासवर्ड(ओटिपी) भनेर भनिन्छ । त्यसलाई नयाँ आउने स्क्रीनमा रहेको इन्टर ओटिपी हियर भनेको स्थानमा राख्नुस् र सबमिटमा ट्याप गर्नुहोस् ।
अन्त्यमा तपाईँले आफ्नो ओटिपी कोड राखेर सबमिट गरिसकेपछि सो प्रकृया समाप्त भएको जानकारी दिन सक्सेस पेज देखाउँछ र तपाईँको कारोबार आईडी समेत त्यसमा उल्लेख गरिएको हुन्छ ।
यतिगरेपछि तपाईँको मोबाइलमा रिचार्जको रकम थप हुनेछ ।
लक्ष्मी ग्रुपले मोबाइल व्यवसाय शुरु गर्दै, ‘कूलप्याड’ ब्राण्ड आउन सक्ने
किरिन ९८५ चिपसेटयुक्त ह्वावेको नोभा ८ प्रो फोरजी सार्वजनिक